Matio 11 "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."
Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mbola hampitomboina hoaminrsika mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izany indray ry havana ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao, eto Jesosy dia miantso; miantso ahy; mianrso anao. Mankanesa aty amiko, zany hoe manatona Azy, ny olona iray mantsy raha miantso dia misy antony hilàna azy izay. Eto anefa dia ny Tompo indray no mila anao hanatona azy, hitondra ny enta-mavesatra ao aminao; inona moa izany enta-mavesatra izany ? Ny fahotanao, ny tebitebinao, ny fahorian-tsainao, ny ahiahinao, ny zava-manahirana anao rehetra tsy handrosoanao amin'ny lafiny ara-panahy, sns…… Izany rehetra izany no angatahin’ny Tompo aminao. Efa nentiny teo ambonin’ny Hazo Fijaliana ny otanao, ny helokao. Koa meteza ary isika hiaiky ny antson’i Jesosy, omeo azy izay mavesatra ao anatinao rehetra ao. Matetika mantsy ry havana dia isika no manao ny tenantsika ho tena mahery sy mafy indrndra, hany ka raha vao misy zava-mitranga eo amin’ny fiainana; dia ny mihazakazaka amin’olombelona mitovy amintsika no andehanana sy hilana hevitra. Hany ka mirona amin’ny lalan-diso ny ankamaroan’ny maro. Ireny anefa dia fitaky ny devoly avokoa, ka mila mailo mandrakariva isika. Fa mitodiha mandrakariva amin’ilay Tompo sy Andriamanitsika ka hahazo ilay fiainana mandrakizay. Araka ny voalaza ao amin’ny 2Korintiana 4:17 . Sady Jesosy ihany koa efa nilaza fa izay manatona ahy hoy Izy dia tsy holaviko mihitsy. Koa manatona Azy, miresaha aminy fa tonga hamonjy ahy sy ianao no nahatongavany teto an-tany. Ary aoka isika hahay hihaino ny feon'ny fieritreretana dia ny feon'ny Fanahy Masina izany izay miteny amintsika sy manoro lalana antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia ao amin'i Kristy Jesosy, ary Izy tenany no efa nilaza fa Izy no fianana, araka ny hita ao amin'ny Jaona 14:6. Ka mila manatona azy mandrakariva isika ny amin'izany ka ho feno ny fiadanan'ny Tompo.
Azo atao tsara ry havana ny milaza ny vetsovetsom-ponao aminy, mora fo sady be fitiavana ny Tompontsika. Raha te hahazo ny fiadanana ary ianao dia manatona ny Tompo, atolory Azy izay olana rehetra misy eo aminao, izay rehetra atrehinao. Sambatra tokoa izay miankina amin’ny Tompo sy matoky Azy. Tarovy koa ry havana fa mila mandini-tena mandrakariva isika eo amin’ny fiainana, hoe inona moa no nahatonga izao? Inona no anton’izao zavatra izao? Maneke mandrakariva izay voalahatry ny tompo, fa mandalo sy miserana ihany izany rehetra izany. Nefa tsy ho ny zavatra rehetra akory dia ho avy aminy avokoa fa misy avimin’ny fahotana izay nataontsika mila hifonana sy hiverenana amin’Andriamanitra. Toy ilay zanaka adala rehefa nahatsapa ny fahadisoany sy ny tsy fetezan’ny zavatra izay nataony Izy dia nanatona, niverina tamin’ny Rainy, dia toa izany koa isika ry Havana, rehefa miverina sy mifona ary mahatsapa ny fahadisoantsika dia faly tokoa ny Tompo manoloana izany; araka ny voalaza hoe “raha misy mpanota iray izay mibebaka dia fifaliana lehibe any an-danitra.” Tsy hianao irery ihany no faly fa ny mponina ao an-danitra. Ry havana raha tsy mbola nifanena tamin’ny Tompo ianao, indro ankehitriny Izy miantso anao, miverena aminy, atolory azy ny helokao, ny fahotana izay vitanao, fa izay mitsotra amin’ny marina no hambinina, ka na inona na inona fahotana vitanao? Anio vonona handray anao ny Tompo, hitanao moa ilay jiolahy izay teo ambony hazofijaliana izay niteny ilay namany, ary nangataka taminy ny hahatsiarovan’i Jesosy azy rehefa tonga any amin’ny fanjakany Izy? Nolazainy taminy araka ny Lioka 23:43. Moa ve tianao ny hifanatri-tava amin’ny Tompo? Moa ve tianao ny hanana fiainam-pahasambarana? Indro Jesosy miantso, manatona ahy, koa raiso ary ny tanan’ny Tompo, ary tadiavo dieny mbola hita Izy, ary henoy ny teny lazainy, fa mamy sady tsara indrindra; eny manoatra noho ny tantely ao ambava izany tenin’Andriamanitra izany.
Koa ankehitriny ary atolory azy ny fonao, ny fanahinao, eny ny fiainanao manotolo mihitsy aza. Mba hanjakany, ka hanehoanao ny voninahitr’Andriamanitra mandritry ny androm-piainanao manotolo izany. Koa izany dia ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Hivavaka isika: Ry Jesosy zokinay indro ianao miantso anay hanatona anao, eny eto anatrehanao misaotra indrindra noho ny amin’ny teninao, fa izany dia hery sy tanjaka ho amin’ny fanarahanay anao; sambatra tokoa izay Tompo manana anao Tompo sy mpamonjy ny fiainanay manotolo. Miondrika eto anatrehan’ny voninatrao lehibe indrindra, mahatsapa ankehitriny fa tsy mendrika ary mila manavao indray ny fanoloran-tenanay eto anoloana anao. Miondrika satria lehibe indrindra ny voninahitrao eny fa na ny anjely aza tsy mahajery ny haben’ny voninahitrao. Ary hitanay ankehitriny izany Jesosy, koa inty raiso ny tananan’ny mpanomponao atsangano, tantano amin’ilay tananao mahery sy masina indrindra, mba hanananay ny fahamasinana miaraka aminao, mandritry ny androm-piainanay, fa sambatra tokoa izay mitoky aminao, matahotra anao, ary mampiantrano anao aty anatin’ny fo sy ny fanahinay. Manjaka ao anatinay ka hananay ny finoana tsy mety maty mandrakizay, miaraka aminao Jesosy Kristy. Tanteraho aminay ary ny teninao, ary omeo hery ihany koa hoentinay manao ny asanao, henehoana ny voninahitrao ary hijoro ho vavolombelonao na aiza na aiza lalana alehanay, dia amin’ny anaranao Jesosy no anaovanay izany.
Misaotra Jesosy ô Amen
Mat 21: 2-3: "Mankanesa amin'iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy hianareo; vahao izy, dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny anareo, dia lazao hoe: Misy raharaha analan'ny Tompo azy; ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy."
Izany ry havana no sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao, ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza ilay zanaboriky iray, hoentina hoany amin'ny tananan'i Jerosalema, raha vakiantsika hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra io, dia teo no nankalazan'ny olona an'i Jesosy sy nihobiany azy ho Mpanjaka. Eto ny Tompo dia manana hambara amintsika, isika izao no toa ilay boriky, izay nifatotra, tonga Izy mba hamonjy sy hamaha ny fatoranao. Misy olana ve eo amin'ny fiainanao, izany no mamatotra anao? Misy ota ve mamatotra anao, toy ny fifohana sigara, ny fisotroana toaka,....? Tonga Jesosy anio milaza aminao, vonona hamaha ny fatoranao, mba hidiranao amin'ny voninahitra lehibe.Tonga ihany koa Izy mba hananao fiainana feno fahasambarana sy fiadanana, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 10:10 . Ny Tompo ry havana dia tiantsika mandrakariva, ary tiany hiray aminy izan'andro, isan'ora eny isan-tsegondra mihitsy aza. Tsarovy ry havana fa isika izao anie tsy misy velona toy izao raha tsy ny famindrampony e! Samy miaiky izany avokoa isika rehetra izao, satria isika tsy misy tompon'ny aina na iray aza; tsy misy afaka mampitombo ny andro iainantsika eny fa na dia iray segondra monja aza. Eto dia miantso ahy, miantso anao ny Tompo. Ary Izy no efa nilaza fa "Mankanesa aty amiko hianareo zay miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa Izaho hanome anareo fitsaharana". Koa meteza ary hanatona ny Tompo ianao ary ampanjakao mandrakariva eo amin'ny fiainanao Izy. ataovy tafaray aminy tanteraka ianao, ka amin'izao sisa izao dia mangataha aminy mba ho tena iray tokoa ianao sy ny Tompo. Araka ny teny izay lazainy ao amin'ny Jaona 17:13 . Raha tianao honina ao aminao tokoa ny fafalian'ny Tompontsika, dia ampidiro ao ampontsika ny Tompo, ka ho fano fifaliana lalandava ka hiditra amboninahitra amin'ny voninahiny. Ka ho faly ny Tompo sy ny mponin'ny lanitra hitsena anao ao an-tranon'ny Ray. Ka hitoetra amin'ny voninahitra lehibe, toy ny nidiran'ny Tompo tao Jerosalema.
Koa raha mety ianao dia andeha hanao ity vavaka ity: Jesosy ô, misaotra anao aho noho ny amin'ny teninao, nentinao nanambaranao fa tsy misy afa tsy ianao irery ihany no vahaolana eo amin'ny fiainako, koa ankehitriny; vonona aho hanara-dia anao, na aiza na aiza toerana misy ahy. Dia aoka Tompo tsy ho izaho instony no velona fa ianao no ho velona ato anatiko, ary aoka ny sitraponao no hataoko fa tsy ny ahy. Koa monena ary tompo ato anatiko, Ianao no Tompo sy Mpanjakan'ny foko. Koa raiso Tompo izany vavako izany mba ho voninahitrao irery ihany, amin'ny anaranao Jesosy no anaovako izany vavaka izany.
Jaona 14:6 Hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.